ကဲတင်ပေးလိုက်ပါပြီ . တောင်းတဲ့သူရှိလို့ပါ . version ကို 2.46 ကိုမတင်ပေးဘဲ သူ့ထက်မြင့်တဲ့ version 2.48 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် . version မြင့်သွားလို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါ ...
Download mediafire ၊ Downlod ifile.it
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:32 AM